China Party Round Barrel Beverage Party Can Cooler SC-50T - Nenwell factory sy mpanamboatra | Nenwell
Ny antoko fisotroana barika boribory ara-barotra dia afaka mangatsiaka SC-50T
Volavola tsy manam-paharoa, malaza ary manavaka.
Famolavolana fitaovana ABS mifangaro.
Rafitra fampangatsiahana mahomby.
Varavarana matevina vita pirinty vita amin'ny landy.
Termostat azo ovaina.
Sariaka ara-tontolo iainana miaraka amin'ny fanjifana angovo ambany.
Ivelany, azo entina, mateza.
Mitady cooler barika boribory ho an'ny divay sy labiera misy anao? Ny cooler zava-pisotro misy anay dia hifanaraka amin'ny filanao na misy fety any ivelany na hetsika fampiroboroboana zava-pisotro aza, afaka mamolavola vata fampangatsiahana izahay dia sahala amin'ny fisotroana angovo Red Bull. Volavola mahasarika maso hisongadina ny marika fisotroanao sy ny sakafonao eny an-tsena ary hahazoana varotra mandrisika bebe kokoa.
Ny endrika barika manokana miaraka amina endrika kanto dia natao hisarika ny sain'ny olona. Ary ny vatan'ny any ivelany dia mety ho fanao amin'ny sary famantarana mahasarika anao izay fitaovam-pivarotana tsara hanasongadinana ny marika zava-pisotro misy anao eny an-tsena sy hahazoana varotra mandrisika bebe kokoa. Ny ampahany mahatalanjona indrindra dia ny hoe azo ampiasaina miaraka amin'ny faribolana LED strip ao anatiny ho mpitazana maso ny vahoaka na dia ao anaty haizina aza. Ary ny loko LED dia mety hitovy amin'ny logo an'ny orinasanao hanatsarana ny fampisehoana marika.
Mihamaro ny olona mitady vahaolana tokana amin'ireo hetsika fampiroboroboana ataon'izy ireo. Izahay dia za-draharaha amin'ny famoahana vata fampangatsiahana na vata fampangatsiahana isan-karazany hahafeno ny fepetra takiana samihafa. Ary ity 50 Litera afaka mamorona vata fampangatsiahana ity dia iray amin'ireo endrika tsara. Ny ampahany tena mahavariana dia ny famolavolana varavarana fitaratra nohavaozina, izay matanjaka kokoa, mihidy buffer-nify, insulate tsara kokoa, manintona kokoa sy kanto kokoa.
Manaraka: Fampirantiana mofomamy mofomamy misy fanala fanala
1. Karazan-boaty tsy mandeha amin'ny herinaratra
2. Marika namboarina
3. Fihetsiketsehana sary EL
4. harona nohamafisina
5. Fampangatsiahana ampiasan'ny fan
6. Rafitra fanalefahana mora
Fahafahana (L) 50L
Fidirana herinaratra (w) 50
Fanjifana angovo (Kwh / 24h) 0.6
Temp. (℃) 0-10
Temp. fanaraha-maso Mekanika
tsy voatery Harona
Size haben'ny (DiaxH) (mm) 442 × 865
Milanja lanja (kg) 17